Huteelada Muqdisho maxay galabsadeen!!! – Xeernews24
Huteelada Muqdisho maxay galabsadeen!!!
26. Januar 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Magaalada Muqdisho buruburkii ka dhacay Dalka kadib waxay gashay marxalad soo kabasho ah, waxaana ku soo badanayay dhismooyin iyo goobo qurux badan, oo ay Mu’waadiniin Soomaaliyeedd galiyeen hantidooda, taasi oo sare u qaaday bilicda iyo quruxda Caasimadda Dalka Soomaaliya, balse waxaa abuurmay Kooxo cadow ku ah soo if baxa muuqaalka qurxoon ee Magaalada, kuwaasi oo bilaabay inay qaraxyo waaweyn la beegsadaan goobahaasi, haddaba waxaan dib u milicsan donna taariikhda iyo goobta ay ka dhaceen Qaraxyadaasi.
December 3-dii 2009kii: Waxaa weerar Ismiidaamin ah lagu qaaday Hotelka Shamow ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ahaa Hotelkii ugu horreeyay ee weerar noocaasi ah lagu qaado, waxaana halkaasi ka dhacaysay munaasabad qalin Jabin ah, iyadoo goobtaasi ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo isugu jiray Arday, Mas’uuliyiin iyo dad kale oo halkaasi ku sugnaa, iyadoo Mas’uuliyiintii weerarkaasi ku dhimatay waxaa ka mid ahaa Wasiirkii Caafimaadka Qamar Adam Cali, Wasiirii Taclinta Sare Prof. Ibrahim Xassan Caddow , Axmed Cabdullaahi Waayeel Wasiirkii Waxbarashada iyo Wasiirkii Ciyaaraha iyo Dhallinyarada Saleebaan Colaad Rooble iyo Dr. Shahiid.
24-kii Agosto 2010, waxaa qarax lagu naf waayay lagu qaaday Hotel Muna.
1-dii Janaayo 2014-kii, Waxaa Qarax loo geystay Hotel Al Jaziira.
22-kii Janaayo 2015-kii, waxaa isna Qarax lala beegsaday Hotel SYL.
July 10, 2015: Laba weerar oo Ismiidaamin iyo weerar toos ah ayaa lagu qaaday Hoteelada Wehliye iyo Siyaad oo ku yalla magaalada Muqdisho, xilli ay ku beegneed Afurka, waxaana halkaasi la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 18-qof oo isugu jira shacab iyo dadkii weerarka qaaday, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay halkaasi 16 qof.
20 Luuliyo 2015-kii, waxaa Qarax lala beegsaday Hotel Jaziira
21-kii September 2015-kii, waxaa qarax lagu weeray Hotel SYL
1-dii Nofember 2015-kii, waxa isna Qarax lagu weeraray Hotel Saxafi.
30-kii bishii Nofember 2015-kii, ayaa waxaa kaloo la weeraray Hotel Jaziira, oo markaasi dib loo dayactiray.
21-kii Janaayo 2016-kii, waxaa kaloo qaraxyo iyo weerarba loo geystay Hotelka Liido Beach and sea Food.
26-kii Febraayo 2016-kii waxaa qarax loo geysaty mar kale Hotel SYL
31-kii Agosto 2016-kii Rag hubeeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraro qaraxyo iyo Dagaal Toos ah waxa ay ku qaadeen ilaa labo hotel oo ku dhow Xeebta Liido Degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir.
30-kii agosto 2016-kii ayaa markii 3-aad qarax aad u buruburiyay dhismihii ayaa xilligaasi ka dhacay Hotel SYL.
25-kii Janaayo 2017-ka waxaa qarax loo adeegsaday Laba Gaari lagu qaaday Hotel Dayax ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo ay naf waayeen Mu’waadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, kaasi oo ahaa kii ugu dambeeyay ee Qaraxyo loo adeegsado.
Qaraxyadaasi markii ay bateen ayay Dawladdu soo saaraty Sharci lagula soconayo dadka dega hoteellada magaalada Muqdisho ayaa wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya kusoo rogtay hoteelladaas, kadib markii bishii hore qaraxyo dad badan ku dhamaadeen ay ka dhaceen Hotel Central.
Sharcigan cusub ayaa dhigaya in la diiwaan-geliyo macaamiisha hoteellada, haddii loo baahdana su’aalo la weydiin karo, wuxuu sharcigaan amarka ah dhigayaan in maamulka hotellada foomam ka buuxiyaan qof kasta oo degaya hoteelkooda, si loo ogaado wuxuu u socdo iyo halka uu ka yimid iyo in hoteelada lagu xiro kaamirooyinka loo yaqaanno CCTV-ga ee ka dhaca waxa ka dhaca gudaha hoteelka ayaa ka mid ah qodobada uu sharcigaan cusub farayo milkiilayaasha hoteellada Muqdisho.
Sharcigan ayaa xadidaya in la iska furto hoteel iyadoo aanay laamaha amniga wax war ah ka hayn.
Hoteelada Muqdisho oo ay degan yihiin dad aad u fara badan oo u badan qurbojoog ayaa dowladda Soomaaliya u aragtay halis weyn, kadib markii uu qarax weyn gudaha Hotel Central uu ka dhacay, iyadoo la sheegay iney is qarxisay haweeney ka shaqeyneysay hotelka oo ka timid dalka Holland.
Haddaba waxaa is weydiin leh maxay galabsadeen Hoteelada Magaalada Muqdisho ku yaal, maxaase laga goynayaa?, su’aashasi waxaa jawaabteeda laga labaa Bulsho weynta ku dhaqan Magaalada
W.D: C/lahi Ruush
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/01/Muqdisho.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-01-26 20:09:522017-01-26 20:09:52Huteelada Muqdisho maxay galabsadeen!!!
Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga oo Turkiga ku booqday ciidamo loo tababarayo... Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii saaka Al-Shabaab ku qaaday saldhiga ciidanka...